Dilka Maafiyada ee riday xukuumaddii Slovakia - BBC News Somali
Dilka Maafiyada ee riday xukuumaddii Slovakia
22 Luulyo 2018
Image caption Banaanbax looga caraysan yahay dilka Jan Kuciak
Miiska uu ku shaqeeyo Jan Kuciak sidiisi ayuu ahaa maalin ka dib markii ugu dambaysay shaqada. Waxaa dul saarnaa bug ka hadlaya qoyska talyaaniga ah ee "maafiyada Ndarangheta".
Wariyahaas dhallinta yar ee sameeya warbixinnada baaritaannada wuxuu ka shaqaynayey sheeko aad xasaasi u ah oo uu doonayey inuu ku qoro shabakadda actuality.sk. Hadday soo bixi lahayd, waxay jilbaha u dhigi lahayd xukuumadda waddanka uu ka soo jeedo ee Slovakia.
Laakin noloshiisa ayey galaafatay. Isaga iyo gabadha ay saaxibka yihiin ayaa meydadkooda oo ay rasaas ku taallo waxaa laga helay meel u dhow aqalkooda, tuulada Vel'ka Macao o ku taalla duleedka caasimadda Bratislava. Waxay jireen 27 sano.
Dambiyada abaabulan ee Talyaaniga
Kuciak wuxuu dibadda soo dhigay sheeko ka soo bilaabatay bartamaha halka xuddunta u ah maafiyada ee koofurta talyaaniga oo keentay ilaa iyo London.
Waxaa ku lug leh dad la kiraysto, shiishyahanno, siyaasiyiin, iyo qolyaha lacagaha raadraacooda baabi'iya, waxayna warbixintu tilmaamaysaa in maafiyada ay ku fidday meelo aad uga baxsan talyaaniga.
Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY
Image caption ka hor intii uusan is casilin ra'iisul wasaare Roberto Fico
Jawaabta ay Slovakia ka bixisay dilka labada qof waxay ahayd mid degdeg ah.
Dibadbaxyo xoog leh ayaa ka dhacay waddooyinka Bratislava, kuwaasoo markii dambe horseeday in xukuumaddu ay dhacdo bishii Maarso, waxaana markaa hogaaminayey ra'iisul wasaare Roberto Fico.
Baaritaannadii Jan Kuciak waxaa la baahiyey oo kaliya geeridiisa ka dib.
Wuxuu dibadda soo dhigay joogitaanka ay Ndrangheta joogaan Slovakia
Xuquuqda Sawirka @RSF_inter @RSF_inter
Wuxuu kaloo shaaca ka qaaday xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya qof la sheegay inuu Ndarangheta xubin ka yahay oo la yiraahdo Antonio Vadala iyo laba la taliye oo xukuumadda ka tirsan.
Labada la taliye waxay u shaqaynayeen ra'iisul wasaare Fico, walow aysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa inuu ogaa xiriirkaas.
Labadooda si KMG ah ayey xilka uga degeen inta baaritaanka la wado, laakin aad ayey u beeniyeen inay xiriir la leeyihiin dambigaas naxdinta leh.
Antonio Vadala wuxuu sheegay inuu yahay nin ganacsade ah, laakin talyaaniga ayaa loo dhoofiyey halkasoo uu ku wajahayo eedeymo ah inuu daroogo galinayey.
Image caption Booliska oo baaraya guriga Antonio Vadala ee Slovakia
Daawo Boorre oo dambi lagu waayay
Jacob Zuma oo la filayo in loo maxkamadeeyo musuqmaasuq
Nin musuqmaasuq dartiis dil loogu xukumay
Eedeymo kale ayaa hore loogu oogay Slovakia, kuwaasoo ah inuu si wax is daba maris ku jiro u doonayey in loogu ogolaado lacago badhitaar ah oo u bixiyo midowga Yurub.
Eedahaas oo dhan wuu beeniyey. Sidaasoo ay tahay, dhanka kale, waxaa weli socda baadigoobka loogu jiro ciddii ka dambaysay dilka Kuciak iyo Martina Kusnirova.
Kuciak wuxuu ogaaday in Antonio Vadala uu ka tirsan yahay qolyaha reer Vadala ee aadka looga baqo, ee saldhigoodu yahay magaalada yar ee Bova Marina oo ku taalla koofurta Talyaaniga. Qoyskaas wuxuu ka mid yahay 150 qoys oo la isku yiraahdo reer "Ndrangheta".
Sidee Ndrangheta ku qabsadeen maafiyada?
Bova Marina waa magaalo-xeebeed yar, waxayna dadku kulaylka qorraxda duhurkii ka galaan baarar leh meelo la harsado.
Image caption Maamulka Bova Marina waxay aad uga cabanayaan Ndrangheta
Dhismaha balaaran ee midabkiisu basaliga yahay ee dawladda hoose ee magaalada muddo sanooyin ahba wuu xirnaa. Xukuumadda ayaa hakisay hawshii golaha deegaanka oo loo yaqaanno Comune di Bova, sababo la xiriira maafiyada oo dhex gashay.
Qiyaastii ilaa iyo 140 sano, Ndarangheta waxay awood dhab ah ka ahaayeen Bova. Halkan laba qoys oo kala ah Reer Vadala iyo reer Libri ayaa ku xooggan.
Ndrangheta waxay halkan ugu billaabatay qaab sidii burcad oo kale ah wixii ka dambeeyey midowgii Talyaaniga 1871, iminkana waxaa loo arkaa tan ugu awoodda weyn kooxaha dambiyada abaabulan ka sameeya dunida, ayadoo lagu qiyaaso in ilaa 10,000 oo qof ay xubno ka yihiin.
Waxay koontaroolaan in ka badan 80% daroogada kookaayiinta ee Yurub la galiyo, taasoo ka timaada bartamaha Ameerika, sannadkiina waxaa laga sameeyaa $104 bilyan.
Waxay kaloo koontarobaan ahaan u kala safriyaan dadka iyo xubnaha bani'aadmiga, waxayna lacago balaayiin ah si sharci darro ah uga helaan midowga Yurub iyo dawladaha hoose.
BBC waxay ogaatay in Ndrangheta ay lacago si xaaraan lagu kasbaday oo balaayiin Yuuro ah ay ka samayso macaash xaaraan ah oo London ay ka samayso, ayadoo gacan ka helaysa kooxo musuqmaasuq sameeya oo ay ku jiraan qareenno iyo xisaabiyeyaal.
Ciidanka hirgelinta shuruucda ee UK iyo Talyaaniga ayaa awooddooda isku biiriyey si ay baaritaan ugu sameeyaan wax uu ku tilmaamay dacwad oogaha caanka ah ee sameeya kiisaska maafiyada Nicola Gratteri, shuraakada caalamiga ah.
"Ndrangheta waxaa isku keenay dhalasho iyo dhiig, wayna adag tahay in la dhex galo" ayuu yiri Gratteri oo dacwado ku soo oogay in ka badan 6000 oo maafiya ah, muddo 35 sano ah oo hawshan uu ku jiray.
Image caption Nicola Gratteri wuxuu sheegayaa in aan la dhex gali karin maafiyada Ndrangheta
Condofuri oo xuduud la leh Bova Marina, dibadda xarunta dawladda hoose waxaa ku qoran "Ndarangheta halkan ma geli karaan".
Dhex galka ayaa micnihiisu yahay in xarunta dawladda hoose la xiray oo duqii hore iyo golihiiba shaqadooda la hakiyey, ka dib markii maafiyada ay ku guulaysteen heshiisyo ku saabsan adeegyada shacabka.
Duqa cusub, Salvatore Mafrici, wuxuu ka mid yahay qolyaha aadka ugu kacsan maafiyada ee aaminsan in dambiyada abaabulan ay la degeen horumarkii magaalada.
"Dadkeenni ugu wanaagsanaa waxaa khasab ku noqotay inay meeshan quruxda badan isaga tagaan. Tani waa gunta dhibaatada na haysata. Culayska dhabarka noo saaran ayaa ah Ndarangheta" ayuu yiri.
Booliska la dagaallanka maafiyada, Guardia di Finanza, waxay qiyaasayaan in kooxdu ay ka hawlgasho ilaa 50 dal oo dunida ah, waxayna kala shaqaynayaan wakaaladda dambiyada ee UK sidii wax looga qaban laha lacagaha ay xaaraanta ku kasbadaan ee London.
Image caption Khariidadda
"Sababo aad macquul u ah ayaa jira oo aan ugu malayn karno …London inay ka mid tahay meelaha ay hantida ka iibsadaan oo ay maalgashadaan" sidaa waxaa yiri G/sare Emilio Fiora oo ka tirsan Guardia.
Wakaaladda dambiyada ee UK kama hadasho baaritaannada socda, laakinse waxay BBC u sheegtay in kooxaha sameeya dambiyada abaabulan ay sannad kasta London mariyaan balaayiin gini oo ah lacago si xaaraan ah lagu kasbaday, badidoona waa shirkado leh qaab aad u cakiran.
Emma Smith oo wakaaladda ugu xilsaaran arrimaha shuraakada iyo yaraynta khataraha ayaa sheegaysa in dad xirfadleyaal ah ay ka caawinayaan kooxaha dambiyada abaabulan gaysta sidii ay lacagaha isu daba marin lahaayeen.
"Magaalada London waa xarun weyn oo dhaqaale, sidaa darteed waa caadi in maalin kasta lacag uu xaddigeedu aad u badan yahay la isku dhaafsado London oo ay soo gasho ama ka baxo" ayey tiri.
Nicola Gratteri wuxuu ugu baaqay hay'adaha hirgalinta sharciga ee dunida inaysan dhayalsan khatarta sii kordhaysa ee kooxda Ndrangheta.
"Haddii balaayiinta Yuuro ee Ndrangheta ay ka sameeyaan iibinta kookaayiinta ay qayb ka noqoto dhaqaalaha rasmiga ah, waxay qarxin karaan dhaqaalaha, waxayna baabi'in karaan dimoqaraadiyadda" ayuu digniin ku bixiyey.